Sargaal kamida Rukumadii musuq maasuqa TPLF oo lacaydhiyay. | ogaden24
Sargaal kamida Rukumadii musuq maasuqa TPLF oo lacaydhiyay.
Kooxda Xayle Maryan ayaa qaaday Talaabo lama filaana oo xilkii lagaga qaaday xubin sare oo kamida Hogaanka kooxda TPLF kana mid ahaa Rukumada musuq maasuqa iyo boobka Hantida Ummada ku caan baxay.
Gudiga dabagalka maaliyada ee maamulka Woyanaha oo qayb ka ah waaxda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa laxaqiijiyay inay baadhis iyo dabagal dheer kadib cadeeyeen, in Esayas Bahre oo ahaa madaxa Bangiga Horumarinta Itobiya uu yahay Laf dhabarta shabakadaha dhaca iyo boobka u samaysan.
Mr Bahre oo xilkan soo hayay tan iyo bilawgii maamulka kooxda TPLF kana mid ah saraakiisha ugu muhiimsan kooxdaasi, ayaa xilka qaadista lagu sameeyay waxay bixisay fasiraado kala duwan oo laxidhiidha Hoos u dhaca awoodeed ee kuyimid kooxda TPLF oo iyadu haysatay dhamaan ilaha dhaqaalaha iyo ciidamada Woyanaha.
Baanka Horumarinta Itobiya ayaa inta badan waxaa uu bixin jiray Lacagaha damaha ah ee lasiiyo Ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan ee Hoos u dhaca dhaqaale kuyimaado, waxaana shakhsigani lagu eedeeyay inuu sameeyay musuq maasuqii ugu balaadhnaa ee sanadihii ugu dambeeyay halakeeyay guud ahaan Hay’adaha dawliga ah.
Gudiga dabagalka ee xil kaqaadista kusameeyay ayaan wax eedayn ah oo laxidhiidha sababta xilka qaadistiisa cadayn sidoo kale Gudigu masheegin in laxisaabtan iyo daba Gal dheeri ah lagu samaynayo, maadaama sababta xilka looga qaaday ay tahay cadaymo rasmi ah oo muujinaya dhaca iyo boobka xad dhaafka ah ee uu ku kacay sanadihii u dambeeyay.
Waxaa jira warar Hoose oo sheegaya in Esayas Bahre lagula Heshiiyay in xilka laga qaado iyada oo la muujinayo awooda kooxda, balse aan wax baadhis iyo laxisaabtan ah lagu samayn sidoo kalana wixii Hanti ah ee uu dhacay ayna wax kasoo qaad lahayn maadaama uu yahay xubin katirsan TPLF.